“ မခံစားနိုငျဘူး သားရယျ … မမေေ မဖွနေိုငျသေးဘူး သား ဆိုတဲ့ ကိုညီညီအောငျထကျနိုငျအကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ မိခငျ ”………… – မြန်မာသတင်းစုံ
မခံစားနိုင်ဘူးသားရယ် မေမေမဖြေနိုင်သေးဘူးသား။ခေါင်းအုံးအောက်မှာသားပိုက်ဆံထားခဲ့တယ်လေငါးထောင်တန်တွေ
မေမေသုံးဖို့ဆို ၂၆ရက်နေ့က မေမေအခုမှတွေ့တယ်သားရဲ့ မေမေသွားမကြည့်နိုင်ဘူး
မေမေကသားကိုလည်းချစ်တယ် သားကြီးကိုလည်းမေမေအရမ်းချစ်တာ မေမေအမြဲဂုဏ်ယူတယ်လေ
သားက စာလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး ကိုကို့ကိုပဲကျောင်းထားလိုက်ပါဆိုပီးအရမ်းသိတတ်တဲ့သားလေး အမယ်လေး
ဒီပြင့်ကလေးတွေကိုလည်းမပစ.်စေချင်ပါဘူး။ဒီမှာကြည့်ပါဦး သားလေး။ကိုညီညီအောင်ထက်နိုင်ရေ
“ မခံစားနိုငျဘူး သားရယျ … မမေေ မဖွနေိုငျသေးဘူး သား ဆိုတဲ့ ကိုညီညီအောငျထကျနိုငျအကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ မိခငျ ”
မခံစားနိုငျဘူးသားရယျ မမေမေဖွနေိုငျသေးဘူးသား။ခေါငျးအုံးအောကျမှာသားပိုကျဆံထားခဲ့တယျလငေါးထောငျတနျတှေ
မမေသေုံးဖို့ဆို ၂၆ရကျနကေ့ မမေအေခုမှတှတေ့ယျသားရဲ့ မမေသှေားမကွညျ့နိုငျဘူး
မမေကေသားကိုလညျးခဈြတယျ သားကွီးကိုလညျးမမေအေရမျးခဈြတာ မမေအေမွဲဂုဏျယူတယျလေ
သားက စာလုပျဖွဈမှာမဟုတျဘူး ကိုကို့ကိုပဲကြောငျးထားလိုကျပါဆိုပီးအရမျးသိတတျတဲ့သားလေး အမယျလေး
ဒီပွငျ့ကလေးတှကေိုလညျးမပစ.ျစခေငျြပါဘူး။ဒီမှာကွညျ့ပါဦး သားလေး။ကိုညီညီအောငျထကျနိုငျရေ
အသက် ၁၁နှစ်အရွယ် ကလေးကို ရေအိုင်ထဲခေါ်ကာ ဓမ္မတာဆန့်ကျင် အသက် ၁၁နှစ်အရွယ် ကလေးကို ရေအိုင်ထဲခေါ်ကာ ဓမ္မတာဆန့်ကျင် အသက် ၁၁နှစ်အရွယ် ကောင်လေးကို ရေအိုင်ထဲခေါ်ကာ ဓမ္မတာဆန့်ကျင် နေအိမ်ရှေ ဆော့ကစားနေသည့် ကလေးငယ်အား ငါးမြှားသွားမည်ဟု ခေါ်ဆိုကာ ရေအိုင်အတွင်း မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်မှု နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင် မှော်ဘီမြို့နယ် ဆတ်သွားတော ကျေးရွာအုပ်စုရှိ တရားလိုမှာ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် ညနေ ၃ နာရီခန့်၌ နေအိမ်တွင် ရှိနေစဉ် အသက် ၁၁နှစ် ၆လအရွယ် သားဖြစ်သူမှာ ငို၍ ပြန်လာသဖြင့် ဖြစ်စဉ်အား မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ထိုသို့မေးမြန်းစဉ် သားဖြစ်သူမှာ နေ့လည် […]